Chaayinaa baasii cidhaa gara-malee dabalaa jirurratti tarkaanfii fudhachuuf - BBC News Afaan Oromoo
Chaayinaa baasii cidhaa gara-malee dabalaa jirurratti tarkaanfii fudhachuuf
Chaayinaan baasii cidhaa gara maleefi yeroo cidha duraa ammoo piraankii walgochuu (wal goyyoomsuu) dabalaa dhufe kan yeroo baayyee gara miidhaafi amala fedha saalqunnamtiitti geessuu danda'u na yaaddesseera jechuun tarkaanfii irratti fudhachuu jetti.
Aanga'oonni akka jedhanitti cidha ammayaa baasii akka malee guddaafi faallaa dudhaa Chaayinaadha waan ta'eef dhaabbachuu qaba.
Aaadaan warri walfuudhan dimismisa keessatti alfedhanis to'annaan ala ta'aa dhufeera.
Biyyattiin akka furmaataatti kan dhiyeessaa jirtu sirna cidhaaf sadarkaa murteessite baasuufi bifa aadaa uffateen akka ta'udha.
Intala ofiin ofitti heerumte quba qabduu?
Suuraalee Cidha Maatii Moototaa
Shamarree otoo hin beekiin heerumte
Namoonni biya Chaayinaa akkuma namoota bityyoota biroo cidha gaggeeffachuu irratti ollaa isaaniifi hiriyyoota isaanii waliin walmorkatu. Kun ammoo yeroo hunda baasiin cidhaa akka malee dabalaa akka deemu taasiseera.
Baasiin cidhaaf barbaacjhisan kan akka nyaataafi dhugaatii, bakka bashannanaa gati jabeessa ta'eefi suuraaf biyya alaa deemuu dabalata. Kanaaf, lammileen Chaayinaa yeroo ammaa yeroo cidha isaanii baasiin hangam jedhanii yaaduu osoo hin taane waan hunda guutachuudha.
Keessummoonniifi warri waamicha dhufanis kennwwaan gati jabeessa ta'an fidanii dhufuun irraa eegama.
Guyyaa cidha isaaniitiif wal si'eessuuf jecha warri walfuudhan aadaan piraankii walgochuu ammoo yeroo ammaa to'annaa ala ta'eera.
Oduun yeroo baayyee namoonni cidha deeman sababii piraankii walgochuutiin walmiidhuun yeroo hedduu gabaafamaa jira.
Torban darbe misirroon dhiiraa aadaa cidha duraa kan hanga hidhamee reebamuutti isa geessisu wayita baqachaa jirutti konkolaataa jala bu'ee rukkutameera.
Torban tokkoon dura ammoo miinjoleen ilaaltuu caccabaatiin madaa'anii turan. Kunis kan isaanirra gahe yeroo misirrichi mana mushurrattii seenuuf jedhutti qottoodhaan cufaa manaa caccabsettidha.
Gabaasni cidha biyya Chaayinaa kanaan walqabtee dhaga'amu kan biraan misirroonni sochii saalqunnamtii raawwachuu akkeessuu/fakkeessuun agarsiisuuf dirqamauu akkasumas, miinjoleen dubartootaa hanga miidhaan tutuqqaa saalqunnamtiin hanga isaanirra ga'uu danda'utti sosobamuun gocha kana raawwatu.
Akka maddu oduu Chaayinaa Xinhua'n gabaasetti ministerri dhimma hawwaasummaa gochgawwan akkasii kana hunda abaaruun "baasii akka maleefi qabeenya mancaasuudha" waan ta'eef cidha baayyee "salphaa"fi "giddu-galeessa" akkaataa ittiin gaggeeffamuu danda'u qajeelfama lafa kaa'eera.
Cidha Maatii Moototaa 2018: Suurawwaniin
21 Caamsa 2018